Malezia: Bilaogera iray hafa nahazo tsikera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Marsa 2019 4:16 GMT
Nitsikera ilay bilaogera, Joseph Tawie noho ny famoahan-dahatsoratra tao amin'ny bilaogin'ity farany ny Lehiben'ny Minisitra Lefitra, Alfred Jabu Numpang, avy ao amin'ny fanjakana Maleziana ao Sarawak. Niampanga ireo mpitondra fanjakana tao Sarawak tamin'ny famafana ireo fanamelohana fanararaotana ara-nofo nihatra tamin'ny vehivavin'i Penan tao amin'ny bilaoginy antsoina hoe The Broken Shield i Tawie, mpanoratra an-tserasera miasa tena sady bilaogera.
Nandrisika ny manampahefana mba hanadihady ny fiampangàna ny fanararaotana ara-nofo natao tamin'ireo vehivavy Penan, ao amin'ny faritr'i Baram ao Sarawak ny bilaogin-dahatsoratra iray. Araka ny tati-baovao , nanamafy ny tsy fahafalian'i Jabu tamin'i Tawie ny minisitry ny kabinetra tsy nitonona anarana tany an-toerana. Naneho ny hatezerany tamin'ny mpanao gazety iray ihany koa i Jabu.